YF Series PE, PP Ary Hazo, PVC Ary Hazo (Volom-borona) Tsipika Extrusion - China YF Series PE, PP Sy Wood, PVC Ary Wood (Foamed) Mpamatsy Line Extrusion, Factory –Jwell
YF Series PE, PP Ary Hazo, PVC Ary Hazo (Volom-borona) Tsipika fanenjehana tontonana
Ny extruder an'ity tsipika extrusion ity dia ny extruder kambana kambana voaroaka SJZ92 namboarina manokana, ity extruder ity dia manana ny mari-pana mifehy ny mari-pana izay manana tombony amin'ny fifehezana ny mari-pana avo lenta, mora sy azo antoka fandidiana. Ny latabatra fanitsiana banga miaraka amin'ny fitaovana fanamafisana matanjaka izay manome antoka ny vokan'ny fihenan-tsasatra. sompanga karazana haul off unit, fitaovana miaraka amin'ny maotera fampihenana hafainganam-pandeha marina sy ny inverter, dia manana tombony azo amin'ny antonony firafitra, hery mahery vaika sy maharitra. Ny fanapahana dia manana ny vokany azo antoka sy marina. Ny stacker dia manana ny mihetsika mametaka trolley sy arofanina fiarovana manokana vita amin'ny fingotra hisorohana ny vokatra tsy ho voarangotra. Ny any ambany ny fitaovana an'ity tsipika extrusion ity dia mampiasa ny solosaina azo atao programa na ny rafitra fanaraha-maso natao ho an'ny trano azo antoka sy azo antoka
JWZ-BMJT30 / 50/100 Machine milomano mitsivalana
Fihenan'ny rano haingam-pandeha Horizontal Type Double Wall Corrugated Pipe Extrusion Line
PVC haingon-trano / Marbra Sheet Extrusion tsipika
PVC PP PE PC ABS Tsipika fampidirana profil kely